दैनिक रूपमा खानुहोस् आधा मुठ्ठी काजू, मिल्नेछ यस्ता गज्जबका फाइदा ! - यादका टुक्रा
दैनिक रूपमा खानुहोस् आधा मुठ्ठी काजू, मिल्नेछ यस्ता गज्जबका फाइदा !
काजूले शरीरको शक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ र यसले ब्याक्टेरियुरिया स्ट्रेप्टोकोकस मउन्टान्टेन्सको पनि सामना गर्दछ, जसले दाँत सम्बन्धि समस्या निम्त्याउछ। आधा मुठ्ठी काजूमा ३७४ क्यालोरी, ३१ ग्राम फ्याट, १० ग्राम प्रोटीन, भिटामिन-ई, भिटामिन-के समावेश हुन्छ। काजूमा क्याल्शियम, आइरन, फोलेट, र जिंक उच्च हुन्छ र १६ ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ।
काजू खाँदा शरीरको मेटाबोलिजम ठीक रहन्छ र धेरै रोगहरू टाढा रहन्छन्। आज हामी तपाईंलाई यसको फाइदाको बारेमा बताउँछौं…
काजूमा मोनो स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ जसले मुटुलाई स्वस्थ राख्छ र हृदय रोगहरूको जोखिम कम गर्दछ। यसमा कोलेस्ट्रोल समावेश हुँदैन। यसमा रहेको एन्टिअक्सीडन्टहरूले हामीलाई मुटु रोगबाट टाढा राख्छ। यस बाहेक, यसमा फ्याटको मात्रा पनि धेरै कम हुन्छ।
काजूलाई उर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ। यसमा समावेश विभिन्न पोषक तत्वले हाम्रो शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्छ।
काजूको तेल पनि हुन्छ जसले छालाको स्वास्थ्य वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। यसले सिलियम, जिंक, आइरन र म्याग्नीशियम समावेश गर्दछ जसले छालाको क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ। काजू खाँदा छालामा रहेका दागहरू पनि हट्छ।
बाक्लो र चमकदार कपाल
काजूमा कपर हुन्छ जसले मिलेनिनको मात्र बढाएर कपालको रंग बढाउँदछ र कपाललाई रेशमी र नरम बनाउँदछ। यसले लिनोलिक र ओलिक एसिड समावेश गर्दछ जसले कपाललाई मजबूत बनाउँछ।
काजूमा भरपूर मात्रामा म्याग्नेशियम समावेश हुन्छ जसले हड्डीहरूलाई मजबूत बनाउन मद्दत गर्छ।
काजूमा एन्टि-अक्सीडेन्टहरू हुन्छन् जस्तै भिटामिन ई र सेलेनियम जसले क्यान्सरबाट बचाउँछ। यसको साथै यसमा जिंक हुन्छ जसले संक्रमणसँग लड्न मद्दत गर्दछ।
काजू मधुमेह कम गर्नका लागि पनि धेरै फाइदाजनक हुनसक्छ। एक अध्ययनका अनुसार काजूले इन्सुलिनको स्तर बढाउँदछ, जसले मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्छ।
काजूमा धेरै लुटेन र जेअक्सन्थिन(zeaxanthin) हुन्छ, जो आँखाका लागि धेरै शक्तिशाली एन्टि-अक्सीडेन्ट हो। यसले मोतीयाविन्दु रोगबाट बचाउँछ र विभिना आँखा सम्बन्धि रोगबाट बचाउँछ।
गर्भवती महिलाको लागि लाभदायक
काजूमा भिटामिन र खनिजहरू धेरै हुन्छन् जुन गर्भवती महिलाहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। काजू गर्भमा रहेको बच्चाका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
काजूमा धेरै एन्टि-अक्सीडेन्ट हुन्छन् जसले पेटको भित्री सतहलाई सुरक्षा दिन्छ। जो मदिरा पिउँछन्, काजूले तिनीहरूको पेट बिग्रनबाट रोक्दछ। यसमा फाइबर उच्च हुन्छ, त्यसैले यसले कब्जबाट पनि राहत दिन्छ।
काजुमा भिटामिन ई हुन्छ जसले उमेरसँगै बढ्ने मानसिक कमजोरीलाई हटाउँछ। हाम्रो दिमाग स्वस्थ बोसोले बनेको हुन्छ र काजूमा पनि फ्याट हुन्छ। काजू खाँदा नर्वस, डिप्रेसन र डिमेन्शिया जस्ता रोगहरू पनि निको हुन्छ।
Don't Miss it सानो सुकुमेलका यति ठुलो फाइदा, यी रोगीका लागि हुन्छ अत्यन्तै उपयोगी
Up Next बिहान खालि पेटमा १ पोटी लसून खानुस्, हुन्छ दूर कब्जियतदेखि कमजोरीसम्मको स्वास्थ्य समस्या
4 months ago 1698 Views
4 months ago 1024 Views
4 months ago 1119 Views
4 months ago 1387 Views
7 months ago 1702 Views
कब्जियत भनेको जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ । झन् अहिले कोरोना महामारीको समयमा सबै जना घरमै बस्ने हुँदा विभिन्न परिकार…
पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै जरूरी कुरा हो किनकि यसले शरीरको विकासमा धेरै मद्दत गर्छ । अनि मरिचले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी…